I-Blog-Tipping: Isikhathi sokukhokha se-Reader! | Martech Zone
I-Blog-Tipping: Isikhathi sokukhokha se-Reader!
NgoLwesine, July 5, 2007 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
Masingachithi isikhathi sabanye! Ngifuna ukusiza ibhulogi yakho noma iwebhusayithi ngokushesha nangokuphumelelayo KANYE uzothola uthando lwesixhumanisi kubhulogi lami.
Lokho okushiwo kuzoshayela ithrafikhi futhi kukusize ngezikhundla zakho kuTechnorati nakuzinjini zokusesha. Ukuze ngikwenze lokho, kufanele ngingene kubhulogi yakho, futhi ithiphu it!
Ungayithola kanjani ibhulogi yakho:
1. Yisho ibhulogi yami kusayithi lakho.
2. Ngilahle umugqa emazwaneni walokhu okuthunyelwe ngesixhumanisi sokuthunyelwe kwakho.
Isithembiso sami: Ngizochitha imizuzu embalwa ngibuyekeza ukwakheka kwakho, ukusebenza kwayo, SEO, kanye nokuthunyelwe kwakho kwakamuva ukuthola okuthile okuzosiza ukulungisa iwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ngizokwenza umzamo wokwenza ithiphu lihluke kuwo wonke amabhulogi noma iwebhusayithi kunokuba ngizame ukuqhuma futhi ngokubambisana 'nginikeze' amabhulogi amaningi.
Yilokho kuphela! Ake sifike ukubhloga ibhulogi!
Zizwe ukhululekile ukudlulisa lesi sixhumanisi kunoma ubani ongathanda ukumthola.
Tags: ukubhloga kwebhulogiukukhokhelwa komfundi
I-Google Adwords: Yonga izindodla ezimbalwa…
I-Blog-Tipping: Imagination + Innovation
Jul 5, 2007 ngo-10: 56 PM
Ngeke ngenqabe lo mnikelo omuhle.
Jul 6, 2007 ku-6: 12 AM
Jul 6, 2007 ku-1: 52 AM
Sawubona Doug, ngithumele isixhumanisi kubhulogi yakho ku:
Unebhulogi enhle kakhulu futhi empeleni ngifunda okuningi kuyo.
Jul 6, 2007 ku-9: 47 AM
Lo mnikelo usebenza isikhathi esingakanani? Nginomsebenzi wasendlini okufanele ngiwenze (cha, angizukuzama ukwenza umsebenzi omusha nge 'blog' kuwo ukuze ngichaze ukuhlanzwa okufanele ngikwenze kokuqukethwe kwami ​​:).
Jul 6, 2007 ku-11: 24 AM
Noma kunini, Pat!
Jul 6, 2007 ku-11: 52 AM
Ilungele ukunconywa tip
Jul 6, 2007 ngo-2: 43 PM
Kade ngifuna ukukucela ukuthi ubuyekeze ibhulogi yami okwesikhashana manje, futhi angikwazi ukukudlulisa lokhu! http://www.srcoley.com/2007/07/06/going-hoofs-up/
Jul 6, 2007 ngo-4: 04 PM
I-Blog idinga ukuba ngesiNgisi? Ngiyabonga
Jul 6, 2007 ngo-6: 20 PM
Ngingathanda ukuhlinzeka ngamathiphu kubhulogi okungeyona eyesiNgisi. Kuzwakala njengenselelo enkulu. Ngeke ngikwahlulele okuqukethwe, kunjalo, kepha ngingathanda ukubuka ukwakheka, ukwakheka, i-SEO, njll.!
Jul 7, 2007 ku-6: 26 AM
Ilungele ukunikezwa ithiphu…
Jul 7, 2007 ku-7: 11 AM
Sawubona futhi! Siyabonga ngempendulo!
Jul 7, 2007 ngo-3: 26 PM
UDoug - noma ngabe uthola noma cha ukuze ubuyekeze iHamelife - ngiyabonga ngalo mnikelo omuhle.
Ngikuxhumanise kokuthunyelwe kwami ​​kwakamuva: HHhawu kodwa! Amantombazane eBennet Asekuhlanganisweni Kwama-Weekest.
Noma yisiphi iseluleko sizotholwa ngokwazisa.
Jul 7, 2007 ngo-5: 22 PM
Ngingeze isixhumanisi kusayithi lakho ku-blogroll yami, esesandleni sokudla ngezansi kwewebhusayithi yami.
Jul 8, 2007 ku-4: 25 AM
Hmm, ngokususelwa ekuphumeni, ngiyethemba unama-clones ambalwa kaDoug alele around
Jul 8, 2007 ku-11: 09 AM
Kuwufanele umsebenzi! Okuhlekisayo ukuthi lapho ngiqala, bengifuna ukwenza ithiphu eyodwa ngebhulogi ngalinye - kepha angikwazi ukuzisiza uma ngiqala!
Jul 8, 2007 ngo-9: 53 PM
Lo mbhalo uzothunyelwa ngoLwesihlanu… Ngiyabonga!
Jul 9, 2007 ku-8: 39 AM
Ngingathanda ukukusa ekunikezeni kwakho. Okuthunyelwe okukhonjwe kubhulogi yakho ku:
Futhi ibhulogi engingathanda ukuba uyiqhaze iku-URL. Uma unemibuzo, mane ungithumele i-imeyili, bese ngiyabonga.
Jul 9, 2007 ku-9: 51 AM
Yeka isipho esihle uDouglas. Siyabonga ngokwabelana ngobuhlakani bakho. Nayi iposi lami lokuncoma ibhulogi. Ngikuthole yize ngibhalisile kubhulogi likaDawud Miracle. Ukuthula.
Jul 9, 2007 ku-10: 33 AM
Ngiyakuthanda lokhu, Doug! Win-win - kufanelana nomoya wokubhuloga kahle impela. 🙂
Jul 9, 2007 ngo-9: 26 PM
Jul 11, 2007 ku-8: 31 AM
Lokhu ukukhushulwa okumangazayo. Ngizama ukuthola ukuthi ngingenza kanjani into efanayo kubafundi bami!
Nayi iposi lami.
Ibhulogi Lokumaketha Amabhizinisi Amancane le-Egg Marketing
Jul 12, 2007 ngo-12: 02 PM
Umbono omuhle wokumaketha uDoug. Uma unemizuzu embalwa yokubukeza isiza sami ukuhlakanipha kwakho kungathokozelwa kakhulu.
Jul 13, 2007 ku-2: 07 AM
UDoug utshelwe indlebe http://netglobalbooks.com/blog/
Noma iziphi izeluleko noma iziphakamiso ziyaziswa kakhulu.
Ngizobuya ukuthola amathiphu amahle nemfundo evela kubhulogi yakho.
Jul 13, 2007 ku-7: 32 AM
Kuhle mfowethu, umqondo onjani lo!
Jul 13, 2007 ku-8: 06 AM
UDoug - angikwazanga ukumelana nami ekufundeni enkosini uqobo
Nasi iposi lami
Ngingathanda imicabango yakho yokuthi ungashaja kanjani ibhulogi yami
Jul 13, 2007 ngo-2: 50 PM
Ngithole umqondo wokukuhlola futhi uthole i- "BLOG Tip" kusuka kwelinye lamabhulogi wami we-fav, "Amasu Wewebhu kaJeremiya.".
Ngakho-ke ngicela u-O Ngicela Uthiphu I-Blog Yami! Abaningi kusengaphambili Ngiyabonga Kuwe!
Jul 15, 2007 ngo-5: 15 PM
KULUNGILE, nasi esinye isicelo.
Jul 16, 2007 ngo-8: 47 PM
Lesi yisiza sami sebhulogi, sicela usinikeze iseluleko.
Jul 17, 2007 ku-2: 47 AM
Ukunikezwa okuhle. Ngingalusebenzisa ngempela usizo oluthile!
Jul 18, 2007 ngo-10: 07 PM
Doug sawubona, sengivele ngibhale okusho intando yakho enhle yokusisiza
Nasi isixhumanisi, thanx 🙂
Jul 19, 2007 ngo-4: 36 PM
Ngingathanda ukusebenzisa ukuhlakanipha kwakho nami…
Jul 20, 2007 ku-7: 50 AM
Uma usalelwe amandla okusalalisa, ngingajabula uma ungabheka iPPC Hero.
Ukunikezwa kwe-Blog: Into enkulu elandelayo
Jul 21, 2007 ngo-9: 43 PM
Okuthunyelwe kuhlelelwe uMsombuluko ekuseni:
Ngifuna noma yini okufanele ungiphonse ngayo - ithempulethi, ukwakheka, i-SEO - noma yini nakho konke. Ngibheke ukwenza okuthile ngokweqile futhi ngidinga ukwazi ukuthi yini okusebenzayo nokuthi yini okungasebenzi.
Jul 23, 2007 ku-7: 59 AM
Kubukeka sengathi le nto yokuthwebula izokugcina umatasa kakhulu. Nakhu engikuthumele ngesixhumanisi sakho:
I-B2B IT ne-Social Media 2: Umbono Wabathengisi
Ngiyabonga, futhi sikufisela inhlanhla!
Jul 31, 2007 ngo-1: 16 PM
Angikwazi ukudlulisa lokhu okuhle kokunikezwa.
Aug 1, 2007 ngo-3: 02 PM
UDoug - nasi isixhumanisi se-blog yami ku umphakathi oqhutshwa amalungu wabahlaziyi bezebhizinisi kanye nabasebenza ngokusebenziseka .. Nginentshisekelo yokuthi ngingaqinisa kanjani ubulungu emphakathini futhi ngigcine abantu bebuya. I-BTW, ngikhokhele kuqala ukuvakashela kwakho okulandelayo ukondla umlutha wakho we-caffeine eStarbucks!
Ngingeza nebhulogi yakho egumbini lethu lokuphakela elitholakala e- http://www.mycatalyze.org/Blogs/CatalyzeBlogsFeedRoom/tabid/1301/Default.aspx.
Ngiyabonga ngamathiphu esengivele ngiwatholile engxoxweni yakho noPaul Dunay.
I-Oct 1, i-2007 ku-4: i-40 PM
UDoug - uyazibuza nje ukuthi uzokwazi nini ukuvuza ibhulogi yami? Ngingeze ibhulogi yami ohlwini lwakho olulindile ku-8/1 futhi manje sekuyi-10/1 - futhi sengivele ngikuthengele i-Starbucks.
Ibhulogi - isihloko = "Ukuhlakanipha Kwamanje"
Iwebhusayithi - http://www.mycatalyze.org
Aug 2, 2007 ku-8: 11 AM
Sawubona Doug; anginasiqiniseko sokuthi ngikwenze kahle lokhu. Nakhu ukubhuloga kwami ​​kule nyanga. Ngifinyeze ama-blogtips ami kusukela lapho ngangiqala khona; futhi sebekhuluma kakhulu ngenye ibhulogi bese bebanika izeluleko. Ngingaba nentshisekelo kunoma iziphi izeluleko onganginika zona.
Aug 10, 2007 ku-5: 50 AM
UDanke für die Infos!
Feb 5, 2008 ngo-5: 32 AM
Kukhona uchungechunge lokuthunyelwe mayelana namamethrikhi wokumaketha komphakathi. Ngisebenzise okuthunyelwe kwakho lapha njengesibonelo esihle sokukhuphula izinga lomuntu weTechnorati Authority. Ngiyaqiniseka ukuthi uyamamatheka ngakho, bheka lapha:
Kwesinye isikhathi iba ne-virus ngokuqinisekile kepha mhlawumbe hhayi ikholaji - ibhizinisi nje 😉